Shiinaha 3mm hal xudunta sanka warshad siligga ah, Soosaarayaasha Oo CE - Tiknoolajiyadda Daahirinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > Maaskaro fidsan silig sanka ah > 3mm silig hal sanle oo muhiim ah
Wayaasheena 3mm ee sanka hal xudunta u ah malaha dhamaadka iyo guntimaha jaban. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS. Waxay leedahay ROHS ilaalinta deegaanka, gaarta kuwa aan sun ahayn, iska caabin laabaya iwm. Waxaa loo dhoofiyay in kabadan toban wadan sida Canada iyo Jarmalka.
Our 3mm silig sanka hal xudunta u lahayn wax jab iyo gunti. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS. Ithas ROHS ilaalinta deegaanka, waxay gaaraan sun aan sun ahayn, iska caabin isku laablaab ah iyo dhaqsaha badan Waxaa loo dhoofiyay in kabadan toban wadan sida Canada iyo Jarmalka.
Hordhaca wax soo saarka ee siligga sanka ee xudunta u ah 3mm
1. silig hal xidid sanka ka kooban yahay qayb ka mid ah 0.45-0.8mm silig bir ah iyo xarunta PP. Sababtoo ah birta gudaha ee birta, waxay leedahay saameyn hagaajin fiican.
2. 3mm silig kaliya oo xudun sanka ah ayaa lawareejin karaa360 darajo, maroojin macquul ah, saameyn qaabeyn wanaagsan.
2.ProductParameter (qeexitaanka) silig 3mm ah oo hal xabbo ah
Maaskarada Numberof ee la soo saaray halkii kiilo
Cadaan / madow / casaan / cawl / buluug
Feature Product iyo Codsiga ee 3mm silig hal xidid sanka
Our 3mm silig hal sanka hal ma laha wadajirka iyo gunti, kaas oo si weyn loogu isticmaalo maaskaro guri.
Faahfaahinta wax soo saarka ee siligga sanka ee xudunta u ah 3mm
Shahaadada Wax soo saarka ee3mm silig hal sanle oo muhiim ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba3mm silig hal sanle oo muhiim ah
We will provide you with 7 * 24 hours follow-up service and technical support when you buy 3mm silig hal sanle oo muhiim ah of our company, so that you can have no worries after sales.
1.Q: Waa maxay saameynta ka hortagga silig halbowlaha sanka ah iyo waji daboolis loo adeegsado?
J: Marka loo eego sanka laba-geesoodka ah iyo sanka aluminium, sanka hal-xidhka ah waa mid aan waxtar badan lahayn, laakiin kharashka sanka laf-dhabarta ayaa ka hooseeya, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa maaskaro wejiga fidsan, iyo saameynteeda difaaca ayaa gaartay heerka maaskaro wejiga fidsan .
2.Q: Maxay yihiin waxyaabaha kufiican biriijka sanka ee maaskarada?
3.Q: xaqiijin noocee ah ayaa sankaaga bar ku dhaafay?
4.Q: sidee buundada sanka oo qoqobata si mas'uuliyad loogu celiyo
5.Q: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
3mm silig laba geesle sanka ah
3mm 100% silig sanka PP
3mm 100% silig sanka Aluminium ah